Tratran’ny aretin’ny voa: miantso tolo-tanana ho an’i Fanaiky ny Solomiral | NewsMada
Tojo tsy fahasalamana i Fanaiky ! Efa fotoana elaela no nidirany hopitaly eny Andohatapenaka, araka ny nampitain’ny tarika Solomiral, sady fianakaviana ihany, omaly. Aretin’ny voa (insuffisance rénale), miampy ny diabeta izay efa nahazo azy ela, ny mahazo ity mpitendry gitara beso, mandrafitra ny tarika Solomiral, ity.
“Efa miha ratsy ny aretiny ka mila fandidiana maika any Inde izany. Mitentina 20.000 euros ny saran’ny fandidiana fotsiny, tsy ao anatiny ny saran’ny fandehanana mivoaka. Manao antso avo amin’izay afaka manampy rehetra izahay fianakaviana, araka izany”, hoy ny nambaran’i Mendrika, iray tampo amin’i Fanaiky, nisolo tena ny fianakaviana sy ny tarika Solomiral.
Manana fikasana ny hanao hetsika ho fanentanana izay tsara sitrapo ny tarika Solomiral, ato ho ato. Manao antso avo amin’ireo namana ao anatin’ny tontolon’ny mozika, ny fikambanana isan-tsokajiny, sns, ihany koa izy ireo. Afaka manao fanampiana amin’ny M’Vola 034 66 619 66 na amin’ny Orange Money 032 07 904 56 izay terem-panahy.